Ụgbọ elu ọhụrụ na-aga Las Vegas site na San Jose, Boston, Orlando na Fort Lauderdale na ụgbọ elu United
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ọhụrụ na-aga Las Vegas site na San Jose, Boston, Orlando na Fort Lauderdale na ụgbọ elu United
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • nzukọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu ọhụrụ na-aga Las Vegas site na San Jose, Boston, Orlando na Fort Lauderdale na ụgbọ elu United.
Unitedgbọ elu United ga-efe ụgbọ elu 81 na Las Vegas n'oge ọbịbịa kacha elu nke Jenụwarị 3-4, yana ụgbọ elu 109 n'ụbọchị ọpụpụ kachasị elu nke Jenụwarị 8-10.
Dabere na nyocha ndị ahịa United States mere n'oge na-adịbeghị anya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% na-ekwu na ha na-atụ anya njem gaa nzukọ na nnọkọ ga-agafe ọkwa tupu ọrịa na-efe efe na 2022.
N'agbata Ọktọba 27 na Nọvemba 9, ọchụchọ na webụsaịtị United maka ụgbọ elu na Las Vegas n'oge CES 2022 ruru 70% ma e jiri ya tụnyere oge izu abụọ gara aga.
United Airlines na-agbakwunye ihe dịka 80% nke ikike o mere maka CES na 2020, na-egosi na njem azụmahịa na-aga n'ihu.
Na nzaghachi nye nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa azụmaahịa ya na mmụba na-achọsi ike, United Airlines na-agbasa usoro ya iji mee ka ọ dịrị ndị bịara CES 2022 mfe isonye na ihe ngosi mmadụ Las Vegas. Ụgbọ elu ahụ na-agbakwụnye ụgbọ elu 14 ọhụrụ kpọmkwem na mbido Jenụwarị n'etiti Las Vegas na San Jose, Calif., Boston, Fort Lauderdale, na Orlando, ma na-agbakwụnye ụgbọ elu 30 site na ọdụ ụgbọ elu ya na San Francisco, Los Angeles, New York / Newark. , na Washington DC/Dulles. Nke a na-anọchi anya mmụba ikike nke 37% ma e jiri ya tụnyere usoro ọ na-emebu na Jenụwarị na Las Vegas.
Ankit Gupta, onye isi osote onye isi oche nke Planning Domestic na United Express kwuru, "Nlaghachi nke nnọkọ mmadụ na ihe omume bụ ezigbo ihe ịrịba ama na mgbake ọrịa a, na United nọ n'ọnọdụ pụrụ iche iji nweta ego na mmụba a." "Anyị na-agbakwunye ihe dị ka 80% nke ikike anyị mere maka CES na 2020, na-egosi na njem azụmahịa na-aga n'ihu na ndị ahịa anyị na-achọsi ike ịbanye na ndị ahịa na ndị ọrụ ibe anyị."
N'agbata Ọktoba 27 na Nọvemba 9, a na-achọgharị ya United Airlines webụsaịtị maka ụgbọ elu na-aga Las Vegas n'oge CES 2022 gbagoro 70% ma e jiri ya tụnyere oge izu abụọ gara aga. Dịka nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya nke ndị ahịa azụmaahịa United, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% na-ekwu na ha na-atụ anya njem gaa nzukọ na nnọkọ ga-agafe ọkwa tupu ọrịa na-efe efe na 2022.
United Airlines ga-efefe ụgbọ elu 81 banye Las Vegas n'ime ụbọchị mbata kacha elu nke Jenụwarị 3-4, yana ụgbọ elu 109 na ụbọchị ọpụpụ kacha elu nke Jenụwarị 8-10.
Ụgbọ elu ọhụrụ gụnyere:
Ụgbọ elu 8 ozugbo si San Jose, California
Ụgbọ elu 6 ozugbo sitere na Fort Lauderdale, Boston na Orlando
Ụgbọ elu 15 ọzọ si San Francisco, yana ụgbọ elu 9 n'ụgbọelu buru ibu
Ụgbọ elu 8 ọzọ si Los Angeles, yana ụgbọ elu 4 n'ụgbọelu buru ibu
Ụgbọ elu 5 ọzọ si Washington DC/Dulles
Ụgbọ elu 2 ọzọ si New York/Newark